Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo su,aal ka keenay Cida ay u xiran tahay Wadooyinka Muqdisho. – War La Helaa Talo La Helaa
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo su,aal ka keenay Cida ay u xiran tahay Wadooyinka Muqdisho.
By shaaca	 On Jun 12, 2018
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa su’aal ka keenay cidda ay u xiran yihiin waddooyinka Muqdisho, haddii uu Madaxweynuhu amar ku bixiyay in la furo.
Xildhibaanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in farriin Madaxweyne Farmaajo uu maalintii sabtigii soo dhigay Boggiisa Twitter-ka uu ku faray hey’adaha amniga inay shacabka u sahlaan isu socodka, jidadka xiranna la furo.
“Ilaa hadda magaaladu sidii ayay ciriiri ugu jirtaa, cabashada shacabkana waa sii labo jibaarantay, Sida ku cad Qodobka 90aad, Farqadiisa (b, c) ee Dastuurka KMG, Madaxweynahu waa Taliyaha Guud ee Ciidammada Qalabka Sida. Wuxuuna magacaabaa Taliyeyaasha Ciidammada Heer Federaal xilkana waa ka qaadaa”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa is weydiiyay haddii Madaxweynaha amar bixiyay sababta ay amaradiisa u fuli la’yihiin,
“Haddaba hadii Madaxweynuhu amray in la furo wadooyinka xiran, waa su’aale: Yey u xiranyihiin wadooyinka magaalada Mogadishu ilaa hada? Hadiise Madaxweynuhu amar bixiyay maxay u fuli la’yihiin amaradiisu? Mise magaaladii Mogadishu ayaa labo Madaxweyne yeelatay oo jidadka la gooyay Dowlad kale ayaa ka talisa? “ayuu yiri Xildhibaanka.
Ugu dambeyn Xildhibaan Mahad Salaad ayaa ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo in bil Ramadaan lagu jiro, isla markaana maalmaha ciida ay fooda nagu soo heyso, dadka shacabka ay ciidamada amniga ka dulqaadaan ciqaabta ay ku hayaan.